ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၄ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း - Netflix သတင်း
ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၄ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း
ခရက်ဒစ် - ပျက်စီးနိုင်သည့် Kimmy Schmidt - Netflix
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှု ၅၀: Vendetta အတွက် V ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၅ ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း
ပြန်လာ၏ ကျိုးပဲ့လွယ်သော Kimmy Schmidt က ရာသီ ၂၊ အပိုင်း ၄ Kimmy ပြန်ပေးဆွဲ Gretchen Kimmy သည် ၀ တ်ပြုသူဟောင်း Gretchen သည်အခြားကိုးကွယ်မှုတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းသောအခါဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုပြုလုပ်သည်။
Mikey သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့စွဲအဘို့အတိတုထုတ်တက်ပြသပေမယ့်သူကအစောပိုင်းနှင့်အခါသမယများအတွက်ဝတ်ဆင်မဟုတ်ပါဘူး။ Titus ကသူ့ကိုဖက်ရှင်ကျအောင်လုပ်ပေးပေမယ့်သံသယဖြစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ သူတို့ကကလပ်သို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ပရောပရည်လုပ်သောအခါသူတို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုများမှာရှင်းပါသည်။ Mikey သည်သူ၏အကနှင့်ရှက်ရွံခြင်းဖြစ်သည်
သူတို့နှောင်ကြိုးသည်အထိသူတို့နှစ်ခုအလွန်သဟဇာတဖြစ်ကြတူသောဒါဟာမကြည့်ပါဘူး ခြင်္သေ့ဘုရင် အစားအသောက်ထရပ်ကားမှာ။ သူတို့ကတစ် ဦး meerkat နှင့် warthog နိုင်ပါတယ်။ Titus သည်သူ့အပေါ်တစ် ဦး ကြက်သား shawarma pita (အစားအစာနှာချေခြင်း) ကောက်ယူသောအခါ Mikey သည်ရယ်မိသည်။
Lillian ကဒီဟာကြာရှည်ခံနိုင်တယ်လို့ထင်ပေမယ့်တိတုကခုခံနိုင်စွမ်းရှိပြီးသူမဟာစမတ်ကျတယ်လို့သူမကိုပြောတယ်။ တိတုသည်ထွက်ပြေး။ သူ၏နံပါတ်ကိုဆုံးရှုံးရန်ပြောလိုက်သည်။
Cyndee က Kimmy ကိုဖုန်းဆက်ပြီး“ ငါ့ကိုသတိရပါ၊ ရာသီ 1. မှ Jon Hamm ရဲ့သိက္ခာရစ်ချတ်ဝိန်းဂယ်ရီဝိန်းဇာတ်ကောင်ကိုရည်ညွှန်းအတွက်ပြပွဲနောက်တဖန်ထူးချွန်ဟာသစီးရီးများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကအပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောစုံလင်ခြင်းနှင့်ပရိယာယ်နှင့်လွယ်ကူသောဟာသတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hamm သည် Don Draper တွင်ကစားသည် မဒ်ဒီဆန်ရိပ်သာနေသူများ ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတွင်မင်းသားသရုပ်ဆောင်မှုအတွက် Emmy ကိုရရှိခဲ့သည်။ နှင့်ရူးသွပ် Rev. ကစားများအတွက်ဟာသစီးရီးအတွက် Guest ည့်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံခဲ့ရသည်
Mad Men အပေါ်နှစ်ဆတိုးခြင်းအားဖြင့် Kimmy နှင့် Reverend တို့ကသူသည်ကမ္ဘာကို Coke ကြော်ငြာနှင့်အတူပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
Cyndee ကသူမကို World Wide Web ပေါ်တွင်ဖတ်သည့်အီလက်ထရောနစ်စာကိုညွှန်ကြားပြီး Gwtchen ၏ဗီဒီယိုကို Interwaves ဟုခေါ်သည်။
Kimmy သည် Gretchen အားသူမ၏အပျော်စီးစီးခရီးစဉ်မှ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်သူမသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သူမကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်ရမည်၊ မည်သည်ကိုမည်သို့စဉ်းစားရမည်ကိုမပြောဘဲသူမကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူမလှေပေါ်သို့လမ်းလျှောက်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက်သူမသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူများပိုင်ဆိုင်သည့်ရေခဲမုန့်၊ ရဲတစ်ကောင်ထံမှသေနတ်ကိုခိုးယူကာ Elmo နှင့်အတူနှာခေါင်းသကြားလုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Gretchen သူမသည်အခြားယောက်ျားသူမ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆုံးဖြတ်ချက်များချခွင့်ပြီးနောက်သူမနောက်လိုက်မခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်။ သူမသည်သိုးတစ် ဦး အဖြစ်သူမ၏ကံကြမ္မာမှနုတ်ထွက်နှင့်နောက်ကျောအလှကုန်သွားချင်တယ်။ Kimmy ကသူမသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစတွေဖြစ်နိုင်ပြီးသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်အတိုင်းလျှောက်လှမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ သူမသည်သူမနောက်လိုက်များနှင့်အတူဘတ်စ်ကားပေါ်မှထွက်ခွာသွားသည်။ သူမနှင့်သူမ၏အမြင်ကိုသူမပြန်တွေ့သည်အထိကျွန်ုပ်မစောင့်နိုင်ပါ။
တိတု Mikey ထံမှရွေ့လျားသည်မဟုတ်ပေမယ့်သူ Lillian သူ working.Titus ရဲ့လိင်တူချစ်သူကြားဆက်ဆံရေးမှာသူ၏ပထမ ဦး ဆုံးရိုက်ချက်ကြီးကထွက်အလုပ်မလုပ်ရဲ့ရှိရာဆောက်လုပ်ရေး site ကိုမှာသူ့ကိုသွားရောက်ပြီးနောက်သူသည်ပုံရသည်။
Mikey သည်မီးဖို / အခြောက်ခံစက်ကိုသတ်မှတ်ချိန်တွင်သူထွက်ခွာသွားသော multitasker tool ကိုရယူရန်ရပ်လိုက်သည်။ သူသည်သူတို့၏နေ့စွဲအတွက်စော။ ရောက်သည်။ တိတုသည်သူနှင့်ကုသမှုပြုပြီးနောက်သူပြန်လာပြီးနောက်သူတို့ပထမ ဦး ဆုံးနမ်းသည်ကိုအံ့သြသွားသည်။ အလှည့်အပြောင်းက Lillian ကသူအလုပ်မှာသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါသူကဒီကိရိယာကိုယူခဲ့တယ်။ သူတို့အကြားတစ်ခုခုရှိခဲ့ကြောင်းသူသိသည်။
အဆိုပါ Bunny ယခုရာသီရာသီ၏အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အဆုံးမှာထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ရန်အကြီးအမြင်ကွင်းတစ်ခုအဖြစ် Bunny နှင့် Kitty အတုတီဗီကြောင်ကြောင်နှင့်ဒင်းဆောင်းရာသီအဖြစ် Will Arnett နှင့်အတူ Kimmy ရဲ့သီချင်းကနေဘဝမှဆောင်ခဲ့လေ၏
Michael ရုံးကိုးကား Scott
Madam အတွင်းရေးမှူးရာသီ5Netflix လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
အချိန်ရာသီ6ဇာတ်လမ်းတွဲ 1 အွန်လိုင်းအပေါ်သို့တစ်ချိန်ကလက်ပတ်နာရီ
အဆိုပါ flash ကိုရာသီ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ Netflix